नेपालको शेयर बजारका बादशाह निर्मल प्रधान भन्छन्, ‘अब डबल बुल निश्चित’ - Aarthiknews
नेपालको शेयर बजारका बादशाह निर्मल प्रधान भन्छन्, ‘अब डबल बुल निश्चित’
नेपालको पुँजी बजार यतिबेला उत्साहित छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा अर्थमन्त्रीले वित्तीय सेवा प्रवर्दन कार्यक्रम अन्तर्गत गरेको गैर–आवासीय नेपालीहरूले दोश्रो बजार मार्फत पनि लगानी गर्न सक्ने गरी पुँजी बजारलाई फराकिलो बनाउने भनी गरेको घोषणा उत्साहको एउटा कारण हो । त्यसैगरी सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकरको गणना भारित औसत लागत विधिबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई सेयर लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्न हाल प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको करको दर ७ दशमलब ५ प्रतिशतबाट घटाई ५ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय अर्को कारण हो ।
यसको अलावा ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था समेत एक आपसमा गाभ्न (विग मर्जर) प्रोत्साहन गर्ने कुरासमेत बजेटमा स्पष्ट रुपमा आएपछि अब बैंकिंग क्षेत्रको बोलावाला रहेको नेपाली शेयर बजार अब ह्वात्तै माथी जाने आनुमान आम लगानीकर्ताहरुको रहेको छ । यो पृष्ठभूमिमा आर्थिकन्युज डटकमले नेपालको ‘वारेन बफेट र ‘शेयर बजारको बादशाह’ जस्ता उपमा पाउँदै आएका सफल शेयर बजारका लगानीकर्ता निर्मल प्रधानसँग पछिल्लो परिस्थितिमा केन्द्रित रहेर नेपाली पुँजी बजार र बैंकिंग सम्बन्धी वार्ता गरेको छ पुँजी बजार र वीग मर्जरको विषय बजारमा चर्चा भइरहेकाले पहिलो श्रृंखलामा पुँजी बजारको पछिल्ला र वीग मर्जरको विषयलाई प्रस्तुत गरेका छौं । प्रस्तुत छ, प्रधानसँगको सम्बादको सम्पादित अंश :
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा अर्थमन्त्रीले शेयर कारोबारको पुँजीगत कर, गैर आवासीय नेपालीलाई शेयर बजारको दोस्रो लगानी जस्तो विषयले पुँजी बजारलाई सहयोग पुग्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । अब के शेयरले कुन दिशा समाउला ?
निश्चय नै, अब बजार सकारात्मक ढंगले अगाडि बढ्छ । पाँच प्रतिशत पुँजीगत लाभकर धेरै अघिदेखि नै तिर्दै आएकोका हुनाले लगानीकर्तालाई त्यति तिर्न गाह्रो लाग्दैन । तर, साढे सात प्रतिशत भने अलिक बढी नै भएको थियो । एनआरएनलाई समेत लगानी गर्न दिने व्यवस्था त झन् राम्रो कुरा भैहाल्यो । अझ राम्रो कुरा के पनि हो भने विग मर्जरको कुरा आयो ।
तर, अब विग मर्जर गर्दा के कस्ता विधि अपनाउन दिने भन्ने जस्ता कुरा निश्चित भएपछि त झन् कुरै बेग्लै हुन्छ । विगतमा जस्तै पूंजीबृदी गर्न हकप्रद शेयर जारि गर्न दिने जस्ता कुरा चाहिं रोकिनु पर्छ । यदि बोनस शेयर वितरण गर्न दिने वा बैंकहरुलाई प्रेसरमा मर्ज गर्ने जस्ता विधि अपनाइयो भने बजारलाई केही असर पार्ला नत्र त अब बजार उर्लनेमा कुनै दुबिधा छैन । यदि हकप्रद शेयर निष्काशन मात्र पनि पूर्णतया रोक्ने हो भने अब मार्केटमा डवल बुल आउँछ ।
डवल बुल भन्नाले ?
नेप्से ३६ सयको अंकमा त न्युनतम पुग्छ । हालसम्मको नेपालको शेयर बजारको बेलिस ट्रन्ड व सर्कल हेर्ने हो भने करिब ६ वर्षको सर्कलमा पुन बजार बुल भएको छ । त्यो बुल पनि सामान्य होइन डबल नै भएको छ । अबको बुल भनेको पनि उच्चतम नै हुन पर्छ । अहिले बजारले बुल समाति सकेको छ । यो सामान्य बुल मात्र हो । यसअघिको उच्चतम विन्दु १८८१ मात्र अबको बुल होइन ? त्यो क्रस नगरी त रियल बुल नै भन्न मिल्दैन । त्यसको दुईगुणा अर्थात् ३६ सय माथि बजार जान्छ, जान्छ । लेखेर राख्नुस् ।
कहिलेसम्ममा पुग्ला त ३६ सयमा नेप्से ?
अब हेर्नुस, अहिले बुलिस बाटो समाति सक्यो । यस्तै सामान्य गतिमा बढ्दा बढ्दै १८८१ काट्छ । २२/२४ सयको बिन्दु क्रस गरेपछि कहाँसम्म जाने हो त्यो त भन्न गाह्रो छ तर पनि ३६ सय चाहीं कट्छ, काट्छ ।
कहिलेसम्ममा भन्ने जुन प्रश्न छ नि त्यो हुन्छ के भने यो ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरको कुरा त आजको भोलि नै गर्न बाध्य पार्ने होइन । कम्तिमा ५ वर्ष त समय पाउँछन् होला । अब चुक्ता पुँजी कति तोक्ने हो, त्यसले पनि समय फरक पार्छ । जे होस् यति चाँही पक्का हो कि ५ वर्षसम्ममा डवल बुल भेट्ने बजार हुन्छ ।
भनेपछि प्रतिक्षा त लामै पो गर्नुपर्ने रहेछ, होइन ?
हो, यो बुलिस ट्रेण्डले लय समात्न २÷३ वर्ष लाग्छ । यो बेला भनेको बैंकहरुले बोनस शेयर दिएर बुललाई सपोर्ट मात्र गर्ने हो । अनि जव बैंकहरुले मर्जमा जानैपर्ने समयसीमा सकिन लाग्छ त्यो बेला बैंकहरुलाई ठुलो प्रेसर आउँछ । हो, त्यहिबेला हो डवल बुल आउने ।
यसै हुन्छ भनेर कसरी ठोकुवा गर्न सकिन्छ र ? लगानी जोखिममा पर्ला नि यो अनुमान फेल खायो भने त ?
ल हेर्नुस्न । ०७२/०७३ सालमा जव दुई अर्बबाट चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने घोषणा भयो नि बैंकहरुको हो त्यहिबेला होइन डवल बुल आएको ? अब पनि त्यस्तै हुने हो । त्यसैले म त के भन्छु भने यो बेला भएजति सबै पैसा हाल्नुस् शेयरमा । यो मेरो सुझाव हो, लगानी कर्ताको हिसाबले । लेखेर राख्नुस, अब बुल शुरू भयो ।
तर, कतिपय बैंकरहरु नै हालको मूल्य चाहीँ नेपाली बैंकहरुको खास र यथार्थ मूल्य हो, विगतमा अधिक मूल्य भएको थियो र मानिसहरूले ठूलो क्षति समेत व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आयो भन्छन् नि ?
मूल्यको कुरामा धेरै कुरा आउँछ । जस्तो आजको मूल्य सहि हो भन्ने कुरा छ नि त्यो पनि कम्पनीको नेट वर्थ र पिई रेसियो कति छ भन्नेले पनि निर्धारण गर्छ। त्यसमाथि बैंकले दिने रिटर्नले पनि मूल्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । जस्तोकी अहिले नै हेर्नुस् न, दश प्रतिशत मात्र रिटर्न दिनेको मूल्य अढाई तीन सयको हाराहारीमा छ । १५/२० प्रतिशतको रेसियो मा दिनेको ४/५ सयको रेन्जमा छ । अनि २५ प्रतिशत भन्दा बढि दिने चाहिँ ६ सयमाथि मूल्यमा छ । यसरी हेर्दा सयकडा ५ रुपैयाँसम्म मुनाफा दिने शेयर मूल्यलाई हामी सामान्यतया ठिकै हो भन्छौ। तर, बुल आउँदाको बखतको कुरै अर्को हो ।
बुल आउँदा कुनै फ्याक्टर को कुरै हुँदैन । त्यो त हुरी बतास आए जस्तै हो । हुरी कुनै लजिक लगाएर आउँछ र ? कतिबेला आउँछ भन्ने समेत कुनै टुङगो हुँदैन। तर, हुरी आउने सिजन शुरू भयो है भन्ने त थाहा हुन्छ नि ! बुल भनेको पनी शेयर बजारको प्राकृतिक कुरा नै हो ।
भनेपछि यसको कुनै सैद्धान्तिक कारण, वा तार्किक प्रक्षेपण गर्न सकिंदैन ?
यो प्राकृतिक चक्रमा चल्छ । चक्र भनेपछि बुझिहाल्नु भो । बुल र वियरको समय घुम्दै आउँछ। यदि होइन भने हेर्नुस् न ०५५/०५६ मा बुल आयो अनी वियर शुरू भो। फेरी ०६२/०६३ मा फेरी बुल आयो । अनी ०६८/६९ मा त्यसपछि त डवल बुल । चक्रमा बुल आएको छैन त ? हामी भन्दैछौ, अब ०७९/८० मा फेरी बुल नै आउँछ । लक्षण हेर्दा त्यो फेरी डवल बुल हुने देखिन्छ ।
थोरै प्रसंग बदलौं, बजेटमा विग मर्जरको कुरा आयो नी के त्यो आवश्यक थियो त ?
मेरो विचारमा हाम्रो देशको आर्थिक विकासको लागि पनि बिग मर्जर अत्यन्तै आवश्यक कुरा हो । म किन पनि यसो भन्दैछु भने विग मर्जर हुँदा नेपालका सबैजसो बैंकहरुको सञ्चालन खर्च घट्छ । अनावश्यक शाखा खोलेर कर्मचारीलाई तलब ख्वाउनु पर्ने वाध्यता हट्छ । अरु त अरु बोर्ड मेम्बर समेत कम हुन्छन् ।
सिटिजन्स बैंक र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको मूल्य सामायोजन
राष्ट्र बैंकले ग्रामीण विकास लघुवित्तको शेयर बेच्ने
सनराइज फष्टको १० करोड कित्ता इकाइ विक्रिमा